အောကျတိုဘာ 17, 2019 – Healthy Life Journal
– မီမိုးမေ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) အခုခေတ်မှာ မျက်ကပ်မှန်တပ်ဆင်သူတွေက ရှားပါးတဲ့ ကူးစက်ပိုးဝင်မှုကြောင့် မျက်မမြင်ဖြစ်လုနီးပါး ထိခိုက်နေရကြောင်း ကျွမ်းကျင်သူတွေက သတိပေးထားကြပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ဗြိတိန်နိုင်ငံက မျက်ကပ်မှန်တပ်ဆင်သူ ၄ သန်းခန့်ဟာ တစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းရေးကို အလေးထားခြင်းဖြင့် မျက်စိကျန်းမာရေးကို ကောင်းစေတယ်လို့ လန်ဒန်ကောလိပ်တက္ကသိုလ်က သိပ္ပံပညာရှင်တွေက...
ပါမောက္ခဒေါက်တာခင်လှလှ (နား၊ နှာခေါင်း၊ လည်ချောင်း၊ ဦးခေါင်းနှင့် လည်ပင်းရောဂါပညာဌာန၊ ဆေးတက္ကသိုလ်-၁၊ ရန်ကုန်) ကျွန်မတို့တစ်တွေမှာ အကျင့်အမျိုးမျိုး ရှိကြပါတယ်။ ကောင်းတာရော၊မကောင်းတာရောပေါ့။ ပြင်ပ လူနာဌာနမှာ ခဏခဏတွေ့ရတာက အပြင် နားရောင်တဲ့ လူနာတွေပါ။ ဘာအလုပ်မှမရှိ၊ အားနေရင် နားဖာချေးကလော်၊ နားကိုကြပ်၊...
နေ့စဉ် ဗီတာမင်ဒီ အလုံအလောက်ရရှိစေမည့် နည်းလမ်း ၁၂သွယ်
– ဇွန်ခိုင်ဦး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ဗီတာမင်ဒီဟာ အရိုးကျန်းမာရေးအတွက် မရှိမဖြစ်အရေးပါတဲ့ ဗီတာမင်တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ လတ်တလောလေ့လာမှုအရ ဗီတာမင်ဒီဟာ အအေးမိခြင်းမဖြစ်အောင် ကာကွယ်ပေးနိုင်သလို စိတ်ဓာတ်ကျရောဂါကိုလည်း တွန်းလှန်ပေးနိုင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဗီတာမင်ဒီမှာ အလားတူ တခြားကျန်းမာရေး အကျိုးကျေးဇူးတွေလည်း ရှိနေပါတယ်။ သတင်းကောင်းတစ်ခုကတော့ လူအများစုက ဗီတာမင်ဒီကို...
ကိုယ်မှားပြီ . . . အချစ်ရေ . . .
ယောက်ျားဖြစ်သူ ခရီးသွားရာမှ တစ်ရက်စောပြီး ညဖက်ကြီး အိမ်ပြန်လာလေသည်။ အိမ်ရောက်သော မိန်းမ မနိုးအောင်ဖြည်းဖြည်းသာသာ အိမ်ထဲဝင်လာသည်။ အိမ်ခန်းထဲရောက်သောအခါ စောင်အောက်တွင် လူနှစ်ယောက်အိပ်နေသည်ကိုတွေ့သဖြင့် ဒေါသအရမ်းထွက်သွားပြီး အနားရှိကပ်ကြေးယူကာ နှစ်ယောက်စလုံးကို ထိုးသတ်လိုက်လေသည်။ ထို့နောက် စိတ်ညစ်လွန်းသဖြင့် အရက်တစ်ခွက်လောက် သောက်ရန် မီးဖိုချောင်ထဲသွားတဲ့အခါ မိန်းမဖြစ်သူက...
ကိုရီးယားမင်းသားလီမင်ဟို ၏ အသားအရေလှပခြင်းလျှို့ဝှက်ချက်
၊ လရိပ်မေ ၊ တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့ မင်းသား၊ အဆိုတော်၊ မော်ဒယ်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ လီမင်ဟိုက ကိုရီးယားရဲ့ ၀င်ငွေအကောင်းဆုံးမင်းသားတွေထဲ တစ်ဦးအပါအ၀င်ဖြစ်ပါတယ်။ သူရဲ့အသားအရေထိန်းသိမ်းနည်းကို ဝေမျှလိုက်ပါတယ်။ ခြောက်သွေ့တဲ့ အသားအရေရှိသူ “ ကြမ်းတမ်းတဲ့ ရာသီဥတုနဲ့ မိတ်ကပ်လိမ်းရတာတွေကြောင့် အသားအရေက ခြောက်သွေ့ပါတယ်။ ပြောရရင်...
ခေါင်းတစ်ခြမ်းကိုက်ခြင်း အမြန်သက်သာစေမည့် သဘာဝအိမ်တွင်းကုထုံး ရှစ်သွယ်
– မီမိုးမေ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ခေါင်းတစ်ခြမ်းကိုက်တယ်ဆိုတာ အဖြစ်များတဲ့ ဦးနှောက်အာရုံကြောဆိုင်ရာ ဝေဒနာပါ။ ခေါင်းတစ်ခြမ်းကိုက်တဲ့အခါ အမြန်ဆုံးသက်သာရာရစေဖို့ လိုက်နာသင့်တဲ့ သဘာဝ အိမ်တွင်းကုထုံးတွေ ရှိပါတယ်။ (၁) ရေခဲကပ်ခြင်း ရေခဲဆိုတာ ရောင်ရမ်းမှုလျော့ကျစေတဲ့အရာလို့ ဟားဗတ်ဆေးကျောင်းလေ့လာမှုအရ သိရပါတယ်။ ခေါင်းတစ်ခြမ်းကိုက်ဝေဒနာ ခံစားရတဲ့အခါ နဖူး၊...
၊ စူး ၊ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) မှိုင်းအုံ့နေတဲ့ ရာသီမှာ နေ့လယ်စာစားဖို့ အပြင်ထွက်ပေးတာက သင့်ကျန်းမာရေးအတွက် ကောင်းပါတယ်။ သင့်အိမ်မှ ရုံးကို သွားချိန်မှာ ရရှိနိုင်တဲ့ အလင်းရောင်ကလည်း သင့်စိတ်ကို လန်းဆန်းစေပါတယ်။ ပြင်ပအလင်းရောင်က ဘာကြောင့် အရေးကြီးတာလဲ ကျွန်မတို့ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ဟာ...